8 Abantu Abaphefumlelweyo noCharles Darwin
Izilwanyana kunye Nendalo UCharles Darwin
8 Abantu abathintekayo nabaphefumlelweyo uCharles Darwin
UCharles Darwin waziwa ngokuba nguyise wokuziphendukela kwemvelo, kodwa waba nefuthe kakhulu kubantu abaninzi ebomini bakhe. Abanye babengabambiseneli, abanye babenempembelelo yeengcali zezemvelo okanye zezoqoqosho, kwaye enye yayingumkhulu wakhe.
Ngezantsi uluhlu lwaba bantu abathintekayo nomsebenzi wabo, owamnceda uCarry Darwin ukuba abe nombono wakhe weNkcazo ye-Evolution kunye neengcamango zakhe zokhetho lwendalo .
UJean Baptiste Lamarck
UJean Baptiste Lamarck. Ambroise Tardieu
u-ean Baptiste Lamarck wayengumhlaza wezilwanyana kunye neengcali zemvelo owayengowokuqala ukuphakamisa ukuba abantu bavela kwiintlobo eziphantsi ngokuzilungelelanisa ngokuhamba kwesikhathi. Imisebenzi yakhe yaphefumlela imibono kaDarwin yokukhethwa kwendalo.
I-Lamarck nayo ifike ngeenkcazo zezakhiwo zokuhlala . Ingcamango yakhe yokuziphendukela kwemvelo yayisekelwe kwingcamango yokuba ubomi baqala njengento elula kwaye yakhiwa kwaze kwaba yinto ebunzima yabantu. Ezi zilungelelwano zenzeke njengezakhiwo ezintsha eziza kubonakala ngokukhawuleza, kwaye ukuba zingasetyenziswanga ziza kuvela kwaye zihambe.
Ayikho yonke imigaqo yeLamarck eyenziwa yinyaniso, kodwa akukho nto inokuthi iimpendulo zikaLamarck zineempembelelo ezinzulu kwizinto ezaziwa nguCharles Darwin njengemibono yakhe.
UThomas Robert Malthus (1766-1834). Magnus Manske
UThomas Malthus wayengumntu onamandla kakhulu kwiingcamango zikaDarwin. Nangona uMalthus engengowososayensi, wayeyomnotho kwaye waqonda abantu kunye nokukhula kwabo okanye ukuncipha. UCharles Darwin wayemangaliswe ngcamango yokuba uluntu lwaba lukhula ngokukhawuleza kunokuvelisa ukutya. Oku kuya kubangela ukufa kwabaninzi ngenxa yendlala kunye nendlela abantu ekugqibeleni babeza kuphuma ngayo.
UDarwin angasebenzisa le ngcamango kwiintlobo zeentlobo zeentlobo zezilwanyana kwaye wenyuka ngcamango "yokusinda kwezona zinto zininzi". Iingcamango zikaMalthus zibonakala zixhasa yonke into eyenziwa nguDarwin eyayenziwe kwiintsika zeGalapagos kunye nokulungiswa kwazo.
Kuphela abantu beentlobo ezinobungqina obuhle beza kusinda ixesha elaneleyo lokudlula ezo zici kubantwana babo. Leli yintloko yekona yokukhethwa kwendalo.
UGeorges Louis Leclerc, u-Comte de Buffon. I-Smithsonian Institute iilayibhrari
UGeorges Louis Leclerc U-Comte de Buffon wayengowokuqala kunye nomphambili wezemathematika oye wanceda i-calcus inventus. Nangona ubuninzi bemisebenzi yakhe egxininise kwiinkalo kunye nokuba kungenzeka, wathonya uCharles Darwin ngcamango zakhe ngendlela ubomi emhlabeni buvela ngayo kwaye kutshintshwa ngokuhamba kwesikhathi. Kwakhona wayekho kuqala ukuba aqinisekise ngokwenene ukuba i- biogeography yayihlobo lobungqina bokuziphendukela kwemvelo.
Kukho konke uhambo luka-Comte de Buffon, waphawula ukuba nangona iindawo zendawo zihlala zifana, indawo nganye yayinezilwanyana zasendle ezahlukileyo ezifana nezilwanyana zasendle kwezinye iindawo. Wayexhomekeka ukuba bonke babenxulumene ngandlela-thile kwaye iimeko zazo zenza ukuba batshintshe.
Kwakhona, ezi ngcamango zisetyenziswe nguDarwin ukuze ancede afike ngcamango yakhe yokhetho lwendalo. Kwakufana kakhulu nobungqina obufumene xa ehamba kwi- HMS Beagle eqokelela iimpawu zakhe kunye nokufunda ubunjani. Imibhalo kaComte de Buffon yayisetyenziswe njengobufakazi bukaDarwin ngeli xesha wabhala malunga nokufunyaniswa kwakhe kwaye wabanika ezinye izazinzulu kunye noluntu.
UAlfred Russel Wallace, ngo-1862. uJacob Marchant
U-Alfred Russel Wallace akazange aphembelele ngqo uCharles Darwin, kodwa kunoko wayephila ngexesha lakhe kwaye wabambisana noDarwin ekuqiniseni iTheory of Evolution ngokuThetha kweNdalo. Enyanisweni, u-Alfred Russel Wallace ngokwenene wenyuka ngengcamango yokhetho lwendalo ngokuzimeleyo, kodwa ngexesha elifanayo noDarwin. Aba babini baqoqa idatha yabo ukuze babonise ingcamango ngokubambisana neLinnaean Society yaseLondon.
Kwaye kwada emva kokuba lo msebenzi ohlangeneyo uDarwin waqhubeka waza wapapasha izimvo zokuqala kwincwadi yakhe ethi Origin of Species . Nangona bobabini bobabini bancedisa ngokulinganayo, iDarwin kunye nedatha yakhe ukususela kwixesha lakhe kwiiGalapagos Islands kunye neMzantsi Melika kunye noWallace kunye nedatha esuka e-Indonesia, iDarwin ufumana ininzi yemali namhlanje. UWallace uye waxhomekeka kumbhalo waphantsi kwimbali yeTheory of Evolution.
Erasmus Darwin. UJoseph Wright
Amaninzi amaninzi, abantu abanempembelelo ebomini bafunyanwa ngaphakathi kwegazi. Yiyo imeko kaCharles Darwin. Umkhulu wakhe, u-Erasmus Darwin, wayeyimpembelelo yokuqala kuCharles. U-Erasmus wayenengcamango yakhe malunga nendlela iintlobo zatshintshana ngayo ngexesha eliba naye nomzukulu wakhe ekugqibeleni eyakhokelela uCharles Darwin endleleni yokuziphendukela kwemvelo.
Esikhundleni sokupapasha iingcamango zakhe kwincwadi yendabuko, u-Erasmus wayebeka ingcamango yakhe ngokuziphendukela kwemvelo kwiifom. Oku kwagcinwa ngabahlali bakhe ukuba bahlasele iingcamango zakhe kwiindawo ezininzi. Ekugqibeleni, wanyathelisa incwadi malunga nendlela ulungelelaniso olubangelwa ngayo i-speciation. Ezi ngcamango ezadlulelwa kumzukulu wakhe zancedisa umbono kaCharles malunga nokuziphendukela kwemvelo kunye nokhetho lwendalo.
UCharles Lyell. Project Gutenberg
UCharles Lyell wayengomnye wabachaphazelekayo bezemvelo kwiimbali. Ingcamango yakhe ye- Uniformitarianism yayiyimpembelelo enkulu kuCharles Darwin. ULyell wayechaza ukuba iinkqubo ze-geologic ezazingqongileyo ekuqaleni kwexesha zazifanayo eziye zenzeka ngexesha langoku kunye kwaye zasebenza ngendlela efanayo.
ULyell wakhuthaza ulandelelwano lweenguqu ezitshintshileyo ezakhiweyo emva kwexesha. UDarwin wacinga ukuba le yindlela yokuphila emhlabeni. Wachaza ukuba loo nto iyingcipheko ezincinci ziqokelelelwe ixesha elide ukuguqula iintlobo zezilwanyana kwaye zenze ukuba zilungelelanise ngakumbi ukukhethwa kwendalo ukuba zisebenze.
ULyell wayengumhlobo omhle kaKaputeni FitzRoy oye wahlola i-HMS Beagle xa uDarwin ehamba kwiinqanawa zaseGalapagos naseMzantsi Melika. I-FitzRoy yazisa iDarwin kwiingcamango zikaLyell kunye noDarwin bafunda iingcamango zemihlaba njengoko behamba ngomkhumbi. Utshintsho olutyebileyo kwithuba liye luchazwa nguDarwin waseTheory of Evolution.
James Hutton. USir Henry Raeburn
UJames Hutton wayengomnye ugqirha wezendalo wehlabathi owawathonya uCharles Darwin. Enyanisweni, ezininzi zeengcamango zikaCharles Lyell ziqale zivezwe nguJames Hutton. U-Hutton wayengowokuqala ukushicilela ingcamango yokuba iinkqubo ezifanayo ezakha uMhlaba ekuqaleni kwakufana noko okwenzekayo namhlanje. Ezi nkqubo "zasendulo" zatshintshe umhlaba, kodwa umbane awuzange utshintshe.
Nangona uDarwin ebone le ngcamango okokuqala xa efunda incwadi kaLyell, kwakungengcamango kaHutton eyathonya ngqo uCharles Darwin njengoko ekhutshwe ngendlela yokhetho lwendalo. UDarwin wathi indlela yokutshintsha ixesha elingaphakathi kwintlobo yinto yokhetho lwendalo kwaye yayiyindlela eyayisebenzisayo kwiintlobo ukususela ekubeni iintlobo zokuqala zavela emhlabeni.
UGeorges Cuvier. IYunivesithi yaseTexas Library
Nangona kungenangqondo ukucinga ukuba umntu ochasene nokuziphendukela kwemvelo ngexesha lokuphila kwakhe yayiya kuba nefuthe kwiChristal Darwin's Theory of Evolution, kwakunjalo nakwiGeorges Cuvier . Wayeyindoda enokholo kakhulu ebomini bakhe kunye neCawa ngokumelene nembono yokuziphendukela kwemvelo. Nangona kunjalo, ngokungenakuzeka wabeka ingqungquthela yomgaqo kaCharles Darwin wokhetho lwendalo.
UCuvier wayengumdlali ochasa kakhulu uJean Baptiste Lamarck ngexesha labo kwiimbali. ICuffvier yaqaphela ukuba akukho ndlela yokuba neendlela ezikhoyo zohlobo olubeka zonke iintlobo kwizinto ezilula kakhulu kubantu abanzima kakhulu. Enyanisweni, uCuvier wacebisa ukuba iintlobo ezitsha ezenziwe emva kwezikhukula ezinobungozi zazisusa ezinye iintlobo. Nangona uluntu lwenzululwazi aluzange lwamkele ezi ngcamango, zafunyanwa kakuhle kwiinkalo ezahlukeneyo zonqulo. Ingcamango yakhe yokuba kwakukho uluhlu olungaphezulu kweyodwa kwiintlobo zanceda ukujonga imibono kaDarwin yokukhetha kwendalo.
5 Abasetyhini abaNzululwazi abaye babangela impembelelo ye-Evolution
Amazwi anomdla malunga noCharles Darwin
Yiyiphi i-Hardy-Weinberg Principle?
Ngubani uCharles Darwin?
Izinto EzinguDarwin Azingazi
James Hutton Biography
5 Emva kweDarwin Evolution isayensi
8 Iindawo eziya kuTyelela e-Italy ukuba ufuna ukuqhuba isiTaliyane
Indlela yokuphepha ukugula kweCigar
Funniest Kim Jong-un Memes
Kutheni Kubalulekile Ukuba Umtshato We-Gay?
Kuphi ukufumana i-Glyphs kunye neefoni kwi-Delphi Isicelo, Imenyu, ibha yamathuluzi
Iphrofayili yeSerial Killer Tommy Lynn Sells
Ngaba Kusemthethweni Ukuthatha Imifanekiso Yezakhiwo Zaseburhulumenteni?
Ukusebenza kwebhola: Indlela yokuqeqesha kwi-30-Second Second Bursts
I-30 yeNgqungquthela ka-1986 I-Rock & Roll Hall yoLwazi lweNkcazo yokuHlanganisa
'Intliziyo Elula' - Icandelo 1
IYunivesithi ye-Dayton Admissions
Ngaba Ukuhlahlela Kuza Kugcina Ubomi Bakho Ngentlungu Yentliziyo?
UbuYuda kwiMfazwe kunye noGonyamelo
Projeter - kwiProjekthi
Ukulanda nokufaka i-Borland C ++ Compiler 5.5
Inkqubo yeMic Magic, Legends, and Folklore
Iimvulophu eziBomvu zisetyenziselwa njani isiChina
'Ukubulala i-Mockingbird' eVinjelwe?